Cedric Kalonji : Kongo (RDK) an-tsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jona 2008 18:55 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, Italiano, Español, 日本語, English
I Cedric Kalonji dia mpilaza vaovao ao amin'ny Radio Okapi, ary mpanoratra ny blaogy mety malaza indrindra avy ao Kongo.
Fa ankoatra ny asany ao amin'ny radio sy ny fitorahana blaogy dia mpaka sary matihanina koa i Kalonji. Nandritra ny andro maromaro izay dia mitety ny sary apetrany ao amin'ny Flickr aho.
Ny tahirin-tsary no ampiasain'i Kalonji hiresahana zavatra iray tahaka ny fitomboan'ireo trano simba ao Binza Ozone, manodidina an'i Kinshasa, noho ny fihotsahan'ny tany isaky ny avy ny orana.
Ny fitokonana ataon'ny miaramila ao amin'ny MONUC
Resadresaka miaraka amin'i Ismael Lo, mpanankato Senegaly
Ary ny tantara nampalahelo nitranga tamin'ny nampiatoana olona roa tao Kinshasa, ny iray nangalatra tariby mampita herin'aratra ary ny iray nividy izany.
Ny tena nahaliana ahy tamin'ireo sary ireo dia noho izy mampiseho ny fiainana andavan'andro ao Afrika izay tsy dia fahitan'ny maro loatra. Ny mpanao gazety iraisam-pirenena mantsy toa manarontsarona ny loza sy ny zavatra tsy mahazatra na mampiavaka an'i Kongo.
Nanapa-kevitra ary aho fa hanontany an'i Kalonji mikasika ny sary alainy ; nanaiky soa aman-tsara hamaly ny fanontaniana izy, ary ity ny resakay nadikako avy amin'ny teny Frantsay :
Oviana, ary nahoana ianao no nanapa-kevitra fa hanokatra blaogy ?
Tamin'ny Septambra 2005 aho no nanokatra ny blaogiko. Tamin'ny voalohany dia fizarana sary mikasika ny isan'androko amin'ny aterineto no nanaovako azy. Rehefa hitako fa nihamaro hatrany ny olona liana amin'ny sary nalaiko dia nampiseho sary maro kokoa aho, ary nampiako lahatsoratra kely. Tao anaty fotoana fohy dia an-jatony ny mpitsidika ny blaogiko, zanak'ampielezana kongole ny ankamaroany. Izay no nampirisika ahy hanohy ny blaogiko, ary amin'izao fotoana izao dia 1000 eo ho eo ny mpitsidika isan'andro.
Oviana ianao no nanapa-kevitra fa haka sary ? Inona no mahasamihafa ny hevitra ampitaina an-tsary sy ny hevitra ampitaina an-tsoratra ?
Tamin'ny 2002 aho no nanomboka naka sary, fakan-tsary kely “numerique” nomen'ny reniko no nampiasaiko tamin'izany. Mieritreritra aho fa mba hahafahana mamaky sy manoratra dia mila mandalo fianarana farafaharatsiny, fa tsy tahaka izany ny sary. Na dia tsy mahay manoratra aza dia afaka maka sary milaza hevitra tahaka ny lahatsoratra. Na dia tsy mahay mamaky teny aza dia afaka mahazo ny zava-misy miseho an-tsary.
Ahoana ny eritreritrao mikasika ny fahitana an'i Kongo any ivelany ? Mampiseho ny zava-misy any an-toerana ve ?
Firenena feno ady no fahitana an'i Kongo, rava daholo ny zava-drehetra ary tsy misy na inona na inona mandeha. Marina ihany io fomba fijery io amin'ny lafiny iray satria, taorian'ny 32 taona nanaovan'i Mobutu didy jadona sy ny 10 taona nanjakan'ny ady izay namono olona mahery ny 5 hetsy, dia tsy tena mandroso ny tanana.
Etsy andanin'izany nefa dia misy tranga izay hadino ny miresaka azy matetika : mitsiky hatrany ny Kongole, mandray ary mifikitra amin'ny fiainana, na dia teo aza ny herisetra nianjady taminy. Mbola eo foana ny mahaolona, ary heveriko fa harena lehibe izany.
Nahoana no sary amin'ny fiainana andavanandro, tranga efa mahazatra no alainao sary ?
Satria mieritreritra aho fa misy zavatra tsy fahitan'ireo olona amin'ny toerana hafa amin'izao tontolo izao, tsy azony an-tsaina akory mety mitranga, tahaka ny hiainako amin'ny andavan'androko. Ny fizarana ireny tranga isan'andro ireny no tena mampirisika ahy, mba hahafahan'ny olona mieritreritra ny toeran'ny Kongole, na ny mponina ao Kinshasa rehefa mijery ny sary asehoko.
Inona ny anjara tazomin'ny fampitam-baovao ataon'ny olom-pirenena amin'ny asanao ? (na dia any ivelany aza ny ankamaroan'ny olona mpamaky ny blaoginao noho ny tsy fahafahana manjifa ny aterineto ao kongo) Inona no mety ho entiny amin'ny ho avy ?
Mamela antsika hihoatra ny sakana ny filazam-baovao avy amin'ny olon-tsotra, ary hahafahana mifandray amin'ny fomba tsy azontsika atao amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra. Raha ho ahy manokana, ny tombony hitako amin'ny blaogy dia ny fahafahako milaza ny hevitro manokana ary ny fahafahan'ny olona avy amin'izao tontolo izao mamaky ahy. Afaka mampahafantatra ny fiainana isan'andro aho izany, ary misarika mpamaky avy amin'ny firenena samy hafa, izay manana fomba fijery sy kolotsaina samy hafa. Heveriko fa fomba fifandraisana tsy azo atao tsinontsinona ny blaogy ho an'ny firenana tahaka an'i Kongo sy Afrika amin'ny ankapobeny.
Mampianatra maimai-poana ny tanora kongole aho mba hizarako ny fitiavako mitoraka blaogy, sy hahazoan'izy ireo ny fandehan'ny fitorahana blaogy sy ny fampitam-baovao amin'izao. Nampianatra olona aho izay efa manana takelaka roa sahady : Ndule2Kin.com sy rdcbel . Tiako hitarina manerana ny fireneko io fampianarana io, ary manerana ny kontinanta Afrika.
Natokana ho an'ny fanadihadiana ataonao ihany ve ny sary alainao ? Sa fialam-boly koa ?
Fialam-boly ny fakan-tsary ho ahy. Tsy misaraka amin'ny fakan-tsariko mihitsy aho ary maka sary mila ho isan'andro. Manana sary an'arivony aho, ary mahafinaritra ahy ny mamadibadika azy ireo, satria mampatsiaro ahy fotoana manokana.
hitako fa tsara ny mapiseho azy
05 Oktobra 2008, 15:18